नायिका पुजा शर्माको महिनाको खर्च मात्रै ९५ हजार, कहाँ खर्च गर्छिन यति धेरै पैसा ? – PanchKhal Online
Home/समाचार/नायिका पुजा शर्माको महिनाको खर्च मात्रै ९५ हजार, कहाँ खर्च गर्छिन यति धेरै पैसा ?
नायिका पुजा शर्माको महिनाको खर्च मात्रै ९५ हजार, कहाँ खर्च गर्छिन यति धेरै पैसा ?
1,1482minutes read
म अलि खर्चालु छु । बच्चैदेखि ड्रेसअप, मेकअप तथा खानपिनमा राम्रै खर्च हुन्छ । कलेज पढ्दा पनि प्रायः मैले नै साथीहरूलाई खाजा खुवाउँथेँ । त्यतिवेला बाबा–मम्मीले दिएको ‘पकेट मनी’बाटै काम चलाउनुपथ्र्याे । मलाई ‘धेरै खर्चालु छेस्’ भन्नुहुन्थ्यो ।
आफैँ कमाउन थालेपछि त खर्चको मात्रा झन् बढेको छ । महिनामा कति खर्च हुन्छ, ठ्याक्कै हिसाब राख्ने गरेकी छैन । तर, ८५ देखि ९५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । अत्यावश्यक काममा त पैसा खर्चनु नै प-यो नि !
ड्रेसअपमा ३५ हजार
सबैभन्दा बढी खर्च डे«सअपमा हुन्छ । कुनै पनि ड्रेस मन प-यो भने जतिसुकै महँगो भए पनि किनिहाल्छु । बजारमा नयाँ फेसन आयो भने पनि मलाई खबर आइहाल्छ । आफूलाई मन पर्ने ड्रेस किन्न कत्ति पनि लोभ लाग्दैन । विदेश गएका वेला त दह्रै सपिङ हुन्छ । महिनामा ३०–३५ हजार ड्रेसमा खर्च हुने गरेको छ ।
गाडी र मोबाइलमा ३० हजार
म कारमा हिँड्छु । त्यसको मेन्टिनेन्स, पेट्रोल आदिमा प्रतिमहिना २० देखि २५ हजार खर्च हुन्छ । मोबाइलमा सात–आठ हजार भए पुग्छ । डाटा पनि त्यसबाटै चलाउँछु । त्यसैले अलि खर्चिलो भएको हो । यो महिना मोबाइल बिग्रिएकाले मेरो थप ५० हजार खर्च भयो ।
ब्युटी पार्लरमा १५ हजार
म वेला–वेलामा ब्युटी पार्लर गइरहन्छु । मलाई हेयर स्टायलमा बढी रुचि छ । पार्लरमा महिनाको १५ हजारजति खर्च हुन्छ । सुटिङका वेला र सुटिङ नहुँदाको खर्चमा भने तलमाथि पर्छ । प्रायः आफन्त, साथीको बिहे, पास्नी, बर्थडे परिरहेको हुन्छ । पार्टीमा जाँदा गिफ्ट लग्नुप-यो, सोहीअनुसार तयार भएर जानुप-यो । त्यसमा पनि राम्रै पैसा खर्च हुने गरेको छ ।
खाजामा १५ हजार
खानपिनमा पनि राम्रै खर्च हुने गरेको छ । साथीहरूसँग कफी, खाजा खाइन्छ । रेस्टुरेन्ट नियमितजस्तै गइन्छ । त्यहाँको खर्च महिनामा १५ हजारजति हुन्छ । कतै घुम्न गइयो भने खर्च बढ्छ । तर, आफूले चाहेजसरी बाँच्न पुगिरहेको छ । नया पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
सालिकराम पुडासैनीको अन्तिम भिडियो बल्ल हात पर्यो, यो भिडियोमा छोराछोरी नहुदाँको पनि पिडा पोख्दै रुदै गरेको दृश्य पनि देखियो
पत्रकार पुडासैनीका भाई चितवन पुगेर गर्जिए, खुल्यो यस्तो सत्य तथ्य हेर्नुहोस
पोखराबाट आयो दुखद खबर ! अस्पतालको बेडबाट जिवनको भिख माग्दै राकेश ! मन सम्हालेर हेर्नुहोला
प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जाने भएपछि पार्टीका सबै काम प्रचण्ड को जिम्मामा